यस्तो पनि हाम्रै समाजमा ? एउटै पुरुषका लागि आमा छोरीको तछाड-मछाड ! « News24 : Premium News Channel
बुटवल । समाजमा लुकेका घटनाहरु खोज्न पनि गाह्रो । खोजेर सञ्चार माध्यमा सम्प्रेषण गर्न पनि लाजमर्दो । तर नउठाएर पनि के गर्नु ? भित्र भित्रै कतिपयको यौनिक चर्तिकलाले समाजका कतिपय सज्जनहरुलाई लज्जित पारिरहेका छन् । सञ्चार माध्यमा उठाई दिए त्यस्तो चर्तिकला गर्न छाड्थे कि भन्ने स्थानीय समाज सेवीको आग्रह छ ।